iphepha VCI for ayoni - China Ma Anshan Steel Packaging
VCI Anti-umhlwa Iphepha -Eco-lula, iyenoqoqosho ezintsha anti-umhlwa iphepha izinto sopakisho VCI ukuze acace kokuya Kukho iindidi ezimbini lwesakhiwo: iphepha VCI kunye PE ukutyabeka (PA) kwaye ngaphandle PE (PO). Le mveliso ngokukhethekileyo carbon zentsimbi kunye kwesinyithi. imveliso PO inokuphinda irisayikilishwe-100% yaye isetyenziswe yokwahlukana phakathi kweengqimba ezithile zesinyithi. imveliso PA Unganikeza imisebenzi manzi kunye greaseproof, ngoko lisetyenziswa impahla yangaphandle ngokunjalo. Asikwazi p ...
Iphepha VCI Anti-umhlwa
iphepha VCI for ayoniiphepha VCI kunye PE ukutyabeka (PA) kwaye ngaphandle PE (PO): - Kukho iintlobo ezimbini lwesakhiwo na. Le mveliso ngokukhethekileyo carbon zentsimbi kunye kwesinyithi. Imveliso PO inokuphinda irisayikilishwe-100% yaye isetyenziswe yokwahlukana phakathi kweengqimba ezithile zesinyithi. Imveliso PA Unganikeza imisebenzi manzi kunye greaseproof, ngoko lisetyenziswa impahla yangaphandle ngokunjalo. Sinako uprinte logo ephepheni VCI.
◆ ukhuselo-ixesha elide yeemveliso zentsimbi kunye nensimbi.
◆ Izikhokelo Intlanganiso kunye nemilinganiselo JIS Z 1535, QB1319-2010, TRGS 615, ROHS, njl
ubunzima Various (50 - 280g / m2)
Previous: iphepha VCI ngokuba nobhedu
Okulandelayo: iphepha VCI for Multi-metal
Njani Vci Paper Work
Steel evala Paper
Vci Iphepha INkcazelo
VCI Paper Abashishina ngokuthumela nangokuthenga kumanye
Vci Paper Lusebenza Njani
Vci Iphepha Msds
Vci Iphepha Rolls
Vci Iphepha Wiki
VCI RUST-UBUNGQINA okwakhiwa Liphepha
Yintoni Vci Paper
iphepha crepe ngaplastiki VCI ifilimu